Miala An-daharana ilay Mpirotsaka Ho Filoham-pirenena Mamim-Bahoaka Tao Korea Atsimo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Novambra 2012 13:06 GMT
Miaraka amin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenena hatao afaka iray volana, hagagàna ny an'ireo Koreana Tatsimo nony niala an-daharana tampoka tamin'ilay hazakazaka ilay lohalaharana amin'ny fandaharana an'ireo mpirotsaka ho fidiana. Ity hetsika ara-politika tsy mbola nisy toa azy ity dia ilay Koreana Tatsimo mpandraharaha mamim-bahoaka lasa nanao politika no nanao azy, Ahn Cheol-soo, izay be no nahita azy ho toy ny kandida tsy mpanao politika sy tsy mpanao kolikoly indrindra teo amin'ny tantara politikan'ny firenena.
Sariitatra maneho an'i Ahn, nakarin'ilay mpampiasa Flickr 안철수의 진심캠프 (CC-BY-NC-SA 2.0)
Toerana tokana no tànan'i Ahn eo amin'ny tontolo politika sy ny fandraharahana ao Korea Atsimo; izy no nanorina ilay orinasa mpanao rindrambaiko ‘antivirus’ , AhnLab, ary iray amin'ireo mpandraharaha sangany ao amin'ny firenena. Dokotera ihany koa izay, manana diplaoma Ph.D sady profesora fahiny sy zokiolona ao amin'ny Anjermanonolom-pirenena ao Seoul izay manana ny maha-izy azy. Vao haingana i Ahn no nampitolagaga satria mpanao politika tsy fahita firy rehefa nandà ny handray ilay vintana volamena natolotra azy ho lasa ben'ny tanànan'i Seoul, izay ny fitsapan-kevitra rehetra dia nanondro an'i Ahn mpandresy tsy ihambahambàna.
Na dia mirna miandàlana mankany amin'ny politika aza izy, manana ny lazany eny anivon'ireo liberaly, ny tony fihetsika sy ireo mpifikitra amin'ny nentin-drazana kosa i Ahn,.
Ny 23 Novambra 2012, nanao fanambaràna i Ahn fa mety hisintaka izy ary hanome ny fanohanany ho an'ilay mpirotsaka avy amin'ny Antoko Demokratika, Moon Jae-in, na dia eo aza ny laza beny. Tsy mbola nisy toa azy ny fihetsiny, zavatra iray tsy fahita firy amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena Koreana Tatsimo, izay aleon'ireo mpirotsaka aza tsy hisy mangirana izany resaka fifampiraharahana izany. Io dia nahatonga ireo mpikirakira aterineto hidera azy sy koa nalahelo. Ny fanehoan-kevitra iray isan'ny be mpifidy indrindra, dia ilay nosoratan'ny mpikirakira aterineto mampiasa ny solonanarana : gusa**** , mivaky hoe [ko] :
Niteny an'ity i Ahn nandritra ny tafatafa ho an'ny mpanao gazety omaly. Na dia zava-dehibe aza ny haha-filoham-pirenena ahy sy hanombohana politika vaovao eto amin'ity firenena ity, hitako mavesa-danja kokoa ny fanehoan'ny mpanao pilitika iray fa hoe mitàna ny fampanantenana nataony tamin'ny vahoaka izy.” Tena manantena fatratra aho fa mba haka lesona avy aminy ireo hafa mpanao politika. Miangavy azy ireo aho.
Ireo tanora mpanohana dia tena diso fanantenana manokana. Ny bitsika mahonena avy amin'i @ssong_a0321 mikasika ireo tanora mpifidy very faharisihana ara-politika avy hatrany noho ny fisintahan'i Ahn dia nahangona fampiakoana bitsika maro be. [ko]
Ny sasany amin'ireo mpiara-mianatra no niteny fa aleon-dry zareo misafidy ny tsy handeha hifidy taorian'ny nandrenesany fa tsy ho isan'ny mpihazakazaka intsony i Ahn. Noho izany dia nanao fanamarihana masiatsiaka mikasika izay aho. Dia, izay. nisy namerina nandefa in-355 io bitsika io. Miangavy, aleo mba hatsahatra io.
@anarchisant nanoratra [ko] mikasika mpanohana iray tena tezitra mafy, izay tsy maintsy naka fotoana ela mihitsy hisainana ilay vaovao :
Iray amin'ireo namako eto amin'ny Twitter no nahazo aretin-tsaina mihitsy nony nandre ny fanambaràn'i Ahn, noho io dia nandefa bitsika manozona izy ho an'i Moon Jae-in sy Jin Joong-kwon [fanamarihana: Jin dia mpanao fandalinana momba ny kolontsaina avy amin'ny elatra havia sady iray amin'ireo Twitterers be mpanaraka indrindra] ary dia niala tsy hanjohy intsony ireo olona nahazatra azy ny nanjohy azy.
Ahn niteny nandritra ny tafatafa iray ho an'ny mpanao gazety, Nakarin'ilay mpampiasa Flickr ì•ˆì² ìˆ˜ì˜ ì§„ì‹¬ìº í”„ (CC-BY-NC-SA 2.0)
Ny antony nanapahan'i Ahn, izay nihazakazaka amin'ny anaran'ny tsy miankina, hevitra hanohana ny mpirotsaka avy amin'ny Antoko Demaokratika, Moon, dia ny mba tsy hiparitahan'ny vaton'ny liberaly ho any amin'ny mpirotsaka natolotry ny antoko eo amin'ny fitondrana, ny mpifikitra amin'ny nentin-drazana. Ny antoko mitondra, Saenuri dia ratsy laza eny anivon'ireo tanora mpifidy noho ireo tantara ratsiny tsy voatanisa intsony ary ilay mpirotsaka natolony, Park Geun-hye, dia malaza ratsy amin'ny maha-zanaka vavin'ny filoha teo aloha Park Chung-hee azy, olobe nahabe resaka nifehy ny firenena tamin'ny fomba tsy refesi-mandidy sady nanafoana ny fahalalahana miteny sy ny demaokrasia.
Ny mampanahy [ko] ireo tanora liam-pandrosoana mpikirakira aterineto dia ny hoe raha i Ahn manana ny fiaraha-mientan'ireo mpanohana, Moon kosa tsy ampy tohana avy any ifotony tahaka izany ary ny fisafidianana an'i Moon hihazakazaka handresy ny mpirotsaka avy amin'ireo mpifikitra amin'ny nentin-drazana dia mety hikiky sy hanimba ny vintana tokony handresena amin'ny fifidianana. @pluto__134340 mampitandrina [ko] fa ny antoko mpifikitra amin'ny nentin-drazana, izay mahatsiaro ho mibohaboha taorian'ny nivoahan'ny vaovao, dia efa miasa sahady toy ireny hoe efa nandresy tamin'ny fifidianana ireny ry zalahy.
Ry mpikambana ao amin'ny antoko Saenuri — aza manao fihetsika ho toy ny efa nandresy an'i Moon Jae-in tamin'ny fifidianana sahady ianareo. Tena faran'izay mankaloiloy (ny mahita anareo mitondra tena toy izany) […] Raha afaka nanisa vato izahay dia resy ireo mpikambana avy amin'ny antokonareo (mpanao kolikoly), mety ho mira amin'ny 10%-‘ny vaton'ny Park. Noho izany, miangavy, akombony ny vava ary henoy ny feon'ny mpifidy.
Nisy ireo fanehoan-kevitra maro tamim-pahatoniana, tahaka ny nomarihan'i @comet35733 [ko] :
Noporofoin'i Ahn ny maha-olona tsotra sy marina azy, ny fahasahiany sy ny maha-olo-mendrika azy tamin'ny nisintahany. Saingy tsy midika izany fa hoe ny politikany sy ny zotrany ara-politika dia nety tsara. Tena nisy mihitsy ireo zavatra nilàna asa ary nokianina. Ny fileferan'i Ahn dia fomba fanehoany azy manokana ny fahafantarany hoe mbola misy fahaiza-manao tsy ampy ao aminy (hihazakazahana ho filoham-pirenena) ka tsy natao hanakianana ny hafa. Noho izany, ianareo mpanohana an'i Ahn, atsaharo ny fanomezana tsiny ny hafa amin'io.
Iray volana latsaka sisa dia efa fifidianana, @bang20 nanipika [ko] ny nahatonga ny tontolo politika ho lasa ambony ambany amin'izao fotoana
Tontolo mikontaontaona re izao. Ny tarik'ireo mpanohitra an'i Ahn, mpanohana an'i Moon Jae-in, ireo andian'olona mpanao politika sy liam-pivoarana noraisin'ny mpitahiry ny nentin-drazana — ireo rehetra ireo mifangaro no mamorona ny tontolo mikorontana sy feno kolikoly na “pandemonium”
Sarin'ny Tantaram-piainan'i Ahn sy Moon, boky ho an'ny ankizy, Nakarin'ilay mpampiasa Flickr 편집장 (CC-BY-NC 2.0)